Ubulula iminyango ngokwezinga elikhulu kuxhomeke ekutheni ukufunde kahle kangakanani futhi uqondanise kahle izinsimbi. Okokuqala, udinga ukukhetha ilungelo buxhomeke ngoba iminyango. Eza nangethusi, insimbi lethusi. Ethandwa kakhulu futhi kufinyeleleke - zethusi, kodwa ngenxa Ukuthamba of indaba ingasetshenziswa kungekho amakhilogremu angaphezu kuka-35 nge isisindo leaf umnyango. Umnyango, enesisindo esingaba amakhilogremu angaphansi kuka-60, usebenzisa i-zethusi kokuhlanganisayo. Basuke ezenziwe ngensimbi noma ukhethe Alloys nethusi ikhava phezulu ukuba adlulisele elikhangayo okukhulu, ukushelela ngcono anti-ukugqwala. Ihhuku isikhathi eside kakhulu futhi enokwethenjelwa zakhiwe ngensimbi. Lokhu lwemidlalo ogibele wangaphambili, bona zihlukaniswa ukuphila isikhathi eside futhi enokwethenjelwa.
Kwakuvamile ukuba phakathi ukusetshenziswa buxhomeke ngoba iminyango uqale creak. Ukuze balahle kubo ezigcotshwe amafutha akhethekile, kodwa ngemva kwesikhashana Uyaqina kuyabuya. Abanye abakhiqizi ukunciphisa ngomshikisho lomnyango izingxenye kukhona amabombo esetshenziswa. imiklamo okunjalo musa creak naphakade, kodwa abiza kakhulu.
Sifunde ukuthi iminyango efakwe izihibe ezimbili, kodwa ngisho indwangu enesisindo 40 amakhilogramu siye sadinga 3 izingcezu, ezimbili asethwe nge Isikhala ka 20 amasentimitha. Heavy futhi omkhulu umnyango panel (ukuphakama - ezingaphezu kuka-210 cm) iyadingeka ukuze 4 izihibe.
Ukuze ukwakhiwa iluphu ngoba iminyango kukhona isikulufa-e, phezulu nesihluthu. Inqubo esetshenziswa kabanzi iluphu phezulu. Zakhiwa izingxenye ezimbili (amaphiko), omunye ehambisana iqabunga umnyango, elinye - ebhokisini. Ngendlela ukuvulwa baqinisile, kwesokunxele, noma jikelele. Ukuze kube iphutha nge choice, ukudweba ipulani yendlu, okuyinto uphawu isiqondiso lapho umnyango liyavuleka. Ukugxila kuso, nabathengisi uzothola wena izesekeli ezidingekayo.
Ekuvikeleni Ukulimaza noma ukusetshenziswa mortise ezifihlakele kokuhlanganisayo ngoba iminyango. Isici yendlela aklanywe ngayo wukuthi umnyango ebhokisini axhunyiwe ngu lomnyango ephilayo, emzimbeni okuyinto ilungiswe ikhefu kwenziwa ngokukhethekile ngo iqabunga umnyango futhi uzimele. Lapho ivaliwe, cishe ezingabonakali futhi ukumela eyinkimbinkimbi ezithile ukwambula.
Intulo lomnyango uthole igama laso izici ukufakwa: basuke screwed ku iqabunga umnyango futhi ebhokisini, futhi bamane batheleke (njengabo bonke nje abanye zinhlobo). negative wabo ukuthi uma kukhona enganele njengoba umnyango obukhulu zokugwema ukuphuka kungenzeka noma ngokuhlaziya ye imithi amaphuzu okunamathiselwe. Ukuphungula nomonakalo onjalo kunzima kakhulu, ngokuvamile zidinga esikhundleni ephelele iqabunga umnyango. Naphezu ukubukeka ekhangayo, isikulufa kokuhlanganisayo kungukuthi laziwe kabanzi.
Buxhomeke for ingilazi iminyango
izidingo ezikhethekile nokufakwa for ingilazi iminyango. impahla Glass-kakhulu Moody futhi ethize, Nokho loops ukuthi asetshenziswa iminyango efana kuhluke ngokwakhayo: enamathiselwe kuwebhu umnyango ingilazi usebenzisa kubakaki ekhethekile kokuba ifaka kuyo izihlahla zenjoloba. kokuhlanganisayo okunjalo ngoba iminyango zakhiwe ngezinto eziqinile, ngoba ingilazi sinzima ngokwanele. Abanye onobuhle abe umnyango esakhelwe eduze, okuyinto evimbela umnyango kusuka wokugoqa abukhali futhi umonakalo.